kp sharma oli Archives - Nagarik Today
होम » kp sharma oli
by नागरिक टुडे मंसिर १४, २०७८
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी भएका छन् । चितवनमा आयोजित १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली पुनः चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । ओलीले १८०८ मत पाएर अध्यक्ष चुनिंदा अर्का प्रत्यासी भीम रावलले २१३ मत पाएका निर्वाचन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । यद्यपि निर्वाचन समितिले मत परिणामको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास सफल नभएपछि मंगलबार बिहान निर्वाचन भएको थियो । एमालेका २ हजार १ सय ५३ प्रतिनिधिहरुमध्ये २ हजार ९६ मत खसेको थियो । नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएदेखि एमालेको नेतृत्व ओलीले सम्हाल्दै आएका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट रावल उपाध्यक्ष बनेका थिए । १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि रावलले अध्यक्ष नबने केन्द्रीय सदस्यमा पनि नरहने घोषणा गरेका थिए ।
मंसिर १४, २०७८0comment
सुवास नेम्वाङले किन छाडे वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी ?
by नागरिक टुडे मंसिर १३, २०७८
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका केपी शर्मा ओलीलाई महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलमध्ये एकलाई रोज्न केपी शर्मा ओलीलाई जति कठिन थियो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्न पनि त्यति नै गाह्रो थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि निवर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका सुवास नेम्वाङ दावेदार थिए । ओली पछिको नेता बन्ने होडमा पोखरेल र नेम्वाङको दूरी निकै बढेको थियो । पोखरेलले वकिलले पार्टी चलाउँछ र ? भनेर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै नेम्वाङले चुनाव लड्न चुनौती मात्र दिएनन्, ओलीलाई तपाईंबाहेक अरुलाई नेता नमान्ने सन्देश पठाएका थिए ।
तर पदाधिकारीमध्ये त्यही वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवमा निर्विरोध भएको छ । ओलीले सोमबार मध्यारातमा बन्दसत्रमा पेश गरेको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेलको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गर्दै आएका नेम्वाङले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । पार्टीको आदेश र महाधिवेशनको म्याण्डेटलाई ध्यानमा राखेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको नेम्वाङले बताएका छन् ।
वरिष्ठमा दाबी गरेको होइन । सबैले उठ भनिरहेका छन्, त्यसैले चुनावमा उठ्नुपर्यो भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्छु भनेको थिएँ । तर त्यतिबेला नै मैले भनेको थिएँ, यो पार्टीका लागि यतिबेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयन अनिवार्य छ । केपी ओलीलाई अध्यक्षमा राखेर उहाँको वरिपरि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । तर त्यसो गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि निर्वाचन हुने परिस्थिति भयो भने शुभचिन्तकहरूले सल्लाहले म निर्वाचनमा जान्छु भनेको थिएँ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । र, मलाई पार्टीले आदेश दियो, अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको प्रस्तावलाई हलले थपडी बजाएर जब पास गर्यो, त्यो प्रो प्रक्रियाबाट मलाई अहिले तपाईं उपाध्यक्षमा लड्नुस् भनियो । मलाई लागेको कुरा अध्यक्षलाई भनेको छु, तर पार्टीको आदेश र महाधिवेशनको म्याण्डेटलाई ध्यानमा राखेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छु ।
मंसिर १३, २०७८0comment
एमाले अध्यक्षमा ओलीले पनि दिए उम्मेदवारी
चितवनको सौराहमा जारी नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अध्यक्ष पदमा भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि ओलीले पनि उम्मेदवारी दिएका हुन् । ओलीलाई विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन् भने शंकर पोखरेलले समर्थन गरेका छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा ओली र रावल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । यसपटक सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको तयारी थियो । तर रावलले अध्यक्षमा दाबी नछाडेपछि निर्वाचनमै जानु परेको हो । ओलीले आइतबार राति बन्दसत्रमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव गरेका थिए । पहिल्यै अध्यक्षमा दाबी प्रस्तुत गरेका रावलको नाम त्यो सूचीमा थिएन । प्रस्तावित पदाधिकारीको सूचीमा नपरेका घनश्याम भूषालले उपाध्यक्षमा र भीम आचार्यले सचिवमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ओलीको प्रस्तावित सूचीमा असन्तुष्ट भएकाहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि निर्वाचनमै जानुपर्ने भएको छ ।
अष्टलक्ष्मी र युवराजले ओलीलाई भेटे, भीम रावललाई मिलाउन सुझाव
by नागरिक टुडे मंसिर १२, २०७८
एमालेभित्र सहमतिमार्फत १० औँ महाधिवेशनको टुङ्गो लगाउने कि निर्वाचनमार्फत भन्नेमा अन्योल कायमै रहेका बेला १० बुँदे पक्षधर दुई नेताले आइतबार बिहान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । सौराहास्थित ओली बसेकै होटलमा गएर शाक्य र ज्ञवालीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका भीम रावलसमेतलाई मिलाएर सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् । सो क्रममा उनीहरूले रावलसँग वार्ता गर्न पनि ओलीलाई सुझाएका छन् । जवाफमा ओलीले आफू सबैलाई मिलाएर लैजान तयार रहेको बताउनुका साथै रावलसँग वार्ता गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए ।
यद्यपि रावललाई कसरी मिलाउने भन्नेमा भने सहमति हुन सकेको छैन । त्यसका लागि थप छलफल हुने बताइएको छ । हिजो बेलुका शाक्य र ज्ञवालीसँगै सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टले पनि ओलीलाई भेटेर सहमतिका लागि दबाब दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनमा जाँदा एकताको सन्देश नजाने भन्दै ओलीलाई मिलाउन आग्रह गरेका थिए । एक स्थायी कमिटी सदस्यले अहिले पनि नेताहरूबीच सहमतिका लागि आन्तरिक दौडधुप भएकाले बन्दसत्र पर धकेलिएको छ । सहमति जुटेपछि छोटो बन्दसत्र चलाउने नेता शेरबहादुर तामाङले बताए ।
मंसिर १२, २०७८0comment
छलफलमा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमै सकस
केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गर्ने सर्वाधिकार आफूमा लिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त छन् ।सौराहस्थित पार्क सफारी होटलमा बसेका उनले नेताहरुसँग समूहगत र एक्काएक्लै छलफल गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुका लागि लबिइङ गर्दै ओलीलाई भेट्न प्रतिनिधिहरु पनि होटलमा पुगेका छन् । तर अहिलेसम्म पदाधिकारीमै सहमति जुटेको छैन । अध्यक्षमै उम्मेदवारी दिने भीम रावलको अडान कायमै छ ।
ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पारेखलको नाम अघि सारेका छन् । अर्का दावेदार सुवास नेम्वाङलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका छन् । तर एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी छाडेका छैनन् । नेम्वाङलाई जनजाति प्रतिनिधिहरुले समेत दाबी नछाड्न दबाव दिएका छन् ।
यस्तै ओलीले महासचिवमा शंकर पोखरेललाई प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का दावेदार विष्णु पौडेललाई उपाध्यक्षमा बस्न आग्रह गरेका छन् । तर पौडेल सहमत भइसकेको छैन । १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका नेताहरुको समेत आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै उनी पोखरेललाई महासचिव छाड्न तयार भएका छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमै सहमति गर्न सकस भएपछि ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अडानमा रहेका रावलसँग सम्वाद गर्न भ्याएका छैनन् । यद्यपि उनीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
केपी ओली उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि विधान फेरियो
गत असोजमा पारित विधानको धारा ६४ (१) अनुसार केपी शर्मा ओली केन्द्रीय अध्यक्षमा चुनाव लड्न नपाउने भएपछि नेकपा एमालेले रातारात विधान संशोधन गरेर ओलीलाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलेको छ । गत असोज १५–१७ मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा ६४ अनुसार केपी ओली अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । एउटै पदमा दुईचोटि पदाधिकारीको उम्मेदवार भइसकेको व्यक्ति सोही पदमा तेस्रोचोटि ‘उम्मेदवार हुन नपाउने’ एमालेको विधानमा व्यवस्था छ ।
नेकपा एमालेको विधान–२०७८ को धारा ६४(१) मा भनिएको छ, ‘पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओली आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । माधव नेपालको साथ लिएर चुनाव लडेका उनी त्यसबेला झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । नवौँ महाधिवेशनमा ओली दोस्रोचोटि अध्यक्षको उम्मेदवार बने र जिते । त्यसबेला उनले माधव नेपाललाई अध्यक्षमा हराएका थिए ।
अहिले दसौँ महाधिवेशनमा ओली तेस्रोपटक सोही पदमा उम्मेदवार बन्दैछन् । तर, दुई महिनाअघि ओलीकै नेतृत्वमा विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानले उनलाई तेस्रोचोटि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगायो ।
आफ्नै नेतृत्वमा पारित विधानले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाएपछि शुक्रबार राति विधानको धारा ६४(१) लाई संशोधन गरेर ओलीका लागि तेस्रोपटक चुनाव लड्ने बाटो खोलिएको छ । पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी ‘उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।’ भन्ने प्रावधानलाई सच्याएर ‘दुईपटक भन्दा बढी एउटै पदमा रहन पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ओलीले पहिलोपटक हारेको र दोस्रो पटक जितेको हुनाले अब फेरि एकचोटि अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गरिएको एक नेताले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदावरीमा पारित विधान नसच्याएको भए ओलीजी उम्मदेवारै बन्न नपाउनुहुनेरहेछ । त्यसैले बाधा अड्काऊ फुकाउनका लागि विधान संशोधन गरेर उहाँलाई अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलिएको हो ।’
त्यसो त एमालेले यसअघि ७० वर्ष पुगेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने विधानमा व्यवस्था गरेको थियो । तर, गोदावरीको विधान महाधिवेशनले केपी ओलीलाई लक्षित गरी ७० वर्ष कटे पनि पदमा रहन पाउने गरी विधान सच्याइसकेको छ ।
केपी ओली यही फागुनमा ७० वर्ष पुग्दैछन् । गोदावरीमा पारित एमालेको विधानको धारा ६४ (२) मा ओलीलाई सजिलो पार्दै भनिएको छ, ‘निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । तर, ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन÷अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन ।’
पोलिटब्यूरोको काम कर्तव्य र अधिकार तोकियो
शुक्रबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो कमिटीको पनि व्यवस्था थप गरेको छ । साथै पोलिटब्यूरो कमिटीको काम कर्तव्य र अधिकार पनि शुक्रबार संशोधित विधानमा थप गरिएको छ ।
यसका साथै २२५ सदस्यीय कमिटीलाई ३०१ बनाउने र पदाधिकारीको सङ्ख्या १५ बाट बढाएर १९ बनाउने गरी एमालेले विधानमा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संशोधित विधान शनिबार राति बन्दसत्रबाट पारित भइसकेको एमाले नेताले बताए ।
नेकपा एमालेको भोलि (१० मंसिर) हुने महाधिवेशन उद्घाटनमा शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चितवन जाने तय भएको छ । सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने अहिलेसम्म जाने नजाने टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् ।महाधिवेशन उद्घाटनका दिन प्रचण्डको काभ्रे जाने कार्यक्रम तय भएको छ । दुईवटा गाउँपालिकामा यसअघि नै तय भएको पार्टीको पालिका अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि भएर प्रचण्ड जाँदैछन् ।
‘उहाँ (प्रचण्ड) महाभारत गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिकाको पालिका अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँ महाधिवेशनमा शुभकामना दिन जाने नजाने टुंगो भइसकेको छैन,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना दिन जाने बताइसकेका छन् । तर सत्तागठबन्धन कै अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने एमालेले बहिष्कार नै गरेको छ । सबै दलका शीर्ष नेतालाई निम्तो दिइएको कार्यक्रममा नेपाललाई निम्तो नै गरिएको छैन । निम्तो नपाएपछि सो पार्टीको जिल्ला तहका नेतासमेत उद्घाटन समारोहमा नजाने भएका छन् ।
मंसिर ९, २०७८0comment
प्रचण्डले भने- म प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन
by नागरिक टुडे मंसिर ८, २०७८
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू अहिले प्रधानमन्त्री पदमा नभए पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा कम नभएको बताएका छन् । कैलालीको भजनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन उदघाटन कार्यक्रममा प्रचण्डले बुधबार सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘हुन त अहिले म प्रधानमन्त्री छैन । तर प्रधानमन्त्रीभन्दा कम पनि छैन ।’
आफूले भनेको नमान्दा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको बताउँदै प्रचण्डले यसपटक भने त्यसो नहुने बताए । प्रचण्डले भने, ‘मैले भन्याजति केही काम नगर्ने कसम खाए केपी ओलीले । त्यही भएर उनी बालुवाटारबाट बालकोट पुगे । अहिले सातै प्रदेशबाट सरकारबाट हात धुनुपर्‍याछ ।’
मंसिर ८, २०७८0comment
माधव नेपाललाई पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न मिलेन : केपी अ‍ोली
by नागरिक टुडे मंसिर ७, २०७८
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पार्टीगत रुपमा निम्ता गर्न नमिलेकाले निम्ता नगरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न मिलेन । किनभने हामीले उहाँलाई साउन २५ गते अनुशासनहीन क्रियाकलाप, लोकतन्त्रमा नसुहाउने पार्टी फुटाउने काम गरेको र त्यो देशको अहितमा रहेकाले कारवाही गरेर निस्कासन गरिएको थियो ।’ उनले सो कुराको जानकारी निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको अवस्थामा भदौ २ गते अवैध रुपमा पार्टी गठन गरेकाले नेपाललाई बोलाउन जरुरी नभएको बताए । उनले माधव नेपालको कुनै पार्टी नभएकाे पनि जिकिर गरे ।
मंसिर ७, २०७८0comment
मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावलले आफूलाई चुनौती नदिएको बताएका छन् । रावलले आफूप्रति सम्मान देखाएको र थकाइ लागेको भए म उठ्छु मात्र भनेको उनले बताए । रावलको सुझावबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै ओलीले भने, ‘मैले उठ्ने टुंगो गरेको छैन । उठ्ने टुंगो गरेँ भने निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ, चुनौती दिन पनि पाइन्छ । चुनौतीलाई स्वागत गर्छु ।’ मंगलबार सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले आफू अध्यक्षको उम्मेदवार भए कसैलाई पनि छाडिदिनुस् भनेर सामान्य आग्रह समेत नगर्ने बताए ।